Imibuzo Evame Ukubuzwa | Jiangxi OK Isayensi Nobuchwepheshe Co., Ltd.
Siyini isikhathi sesiqinisekiso somshini wakho?
unyaka owodwa kusukela ngosuku lokuthunyelwa. Ngesikhathi sewaranti, uma umkhiqizo unezinkinga zekhwalithi (ngaphansi kwesimo esivamile sokusebenza), umphakeli unesibopho sokushintshwa kwezingxenye eziphukile, futhi mahhala. Izimo ezilandelayo ngaphakathi kwesikhathi sewaranti azikho mahhala: A. Uma izingxenye zonakele ngenxa yokusebenza okungekho emthethweni komthengi noma izici zemvelo, umthengi uzothenga futhi abuyisele izingxenye ezivela kumphakeli futhi athwale izindleko ezihambisanayo; B.Ukushintshwa kwezingxenye ezingasetshenziswa ngaphakathi kwesikhathi sewaranti akusikho kwesilinganiso samahhala, futhi izingxenye zokungcebeleka zamahhala ezilethwa ngomshini zingezingxenye ezingasetshenziswa
imuphi imodeli yomshini okufanele ngiyikhethe ochungechungeni lomkhiqizo wakho?
Senza izicubu zokuguqula iphepha nokupakisha imishini, imishini yokwenza imaski elahlayo
Uma udinga umshini wokuguqula izicubu, sicela unikeze imininingwane yakho yephepha le-jumbo, isicaciso somkhiqizo wesicubu esiphelile.
Uma udinga umshini wokupakisha izicubu, sicela unikeze ifomu lakho lephakheji lezicubu kanye nokucaciswa kwephakeji.
Uma udinga umugqa ophelele kusuka ekuguqulweni kwezicubu kuya ekupakisheni, sicela unikeze ukwakheka kwesikhala sefektri, ukucaciswa kwe-jumbo iphepha roll, umthamo wokukhiqiza, ifomu lephakheji lezicubu eliqediwe, sizokwenza umdwebo ophelele womugqa kufaka phakathi izicubu zethu zokuguqula nokupakisha umshini nakho konke ukuhambisa okudingekayo uhlelo lokulawula.
Uma udinga imishini yokwenza imaski, sicela unikeze izithombe zakho zemaski bese ucela.
Sizoncoma futhi sinikeze imodeli efaneleke kakhulu yesisekelo somshini wethu kulwazi olungaphezulu.
iyini insizakalo yokuthengisa ngemuva kokuthola imishini?
Ngaphansi kwesimo esijwayelekile, ngemuva kokuba imishini ifikile, umthengi kufanele axhume ugesi nomoya kwimishini, lapho-ke abathengisi bazothumela uchwepheshe ukufaka ulayini wokukhiqiza. Umthengi uzokhokha amathikithi abo ohambo lokuya nokubuya efektri yaseChina eya efektri yomthengi, ukukhokhiswa kwamavisa, ukuthuthwa kokudla nendawo yokuhlala. Futhi isikhathi sokusebenza kochwepheshe amahora angama-8 ngosuku nomholo wansuku zonke we-USD60 / umuntu.
Umthengi uzophinde ahlinzeke ngomhumushi wesiNgisi nesiShayina ozonikeza usizo kochwepheshe
Ngesikhathi sobhadane lomhlaba wonke, Umthengi kufanele azi ukuthi umthengisi ngeke akwazi ukuthumela unjiniyela wokufakwa komshini nokuthunyelwa. Imenenja yethu yokuthengisa nonjiniyela bazokuqondisa / bakusekele ngokuxhumana ngevidiyo / isithombe / ifoni. Ngemuva kokuthi leli gciwane liphele futhi nemvelo yomhlaba wonke iphephile, kuvunyelwa i-visa nezindiza zamazwe omhlaba kanye nenqubomgomo yokungena, uma umthengi edinga ukuthi unjiniyela ahambele ukwesekwa, abathengisi bazothumela uchwepheshe ukuthi azofaka umshini. Futhi umthengi uzokhokha imali ye-visa, amathikithi endiza okubuya nokubuya esuka efektri yaseChina kuya efektri ka-buye, ukuthuthwa kokudla nendawo yokuhlala edolobheni lomthengi. Umholo wochwepheshe yi-USD60 / ngosuku / umuntu.